Home AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKW FOKWỌ Ndị na-egwu egwuregwu bọọlụ Argentine Papu Gomez Childhood Story Plus Ihe Na-adịghị Agụba Akụkọ Ndụ
Akwụkwọ akụkọ anyị bụ Papu Gomez na-agwa gị Eziokwu gbasara Akụkọ nwata ya, Ndụ mbido, Ndị nne na nna, Ezinụlọ, Nwunye, Childrenmụaka, arsgbọala, Wortọ Net, Ndụ na Ndụ Nke Onwe.
Na nkenke, nke a bụ Ndụ Ndụ nke ndị ọkachamara na-egwu egwuregwu nke Argentine. Anyị na-amalite site n'oge ọ bụ nwata, ruo mgbe ọ ghọrọ onye a ma ama.
Iji mee ka agụụ ịgụ akụkọ ọdịnala gị sie ike, nke a bụ oge ọ bụ nwata rue ụlọ okenye - nchịkọta zuru oke nke Papu Gomez's Bio.
Ndụ na ịrị elu nke Papu Gomez.
Ee, onye ọ bụla maara na ọ bụ nnukwu onye ndu na nkà mmụta ọrụ na ike. Otú ọ dị, ọ bụ nanị mmadụ ole na ole na-atụle mbipute anyị nke Papu Gomez nke bụ ihe na-akpali mmasị. Ugbu a na-ebuteghị ọzọ, ka anyị bido.
Papu Gomez Nwatakiri Akuko - Nzuzo Ezinne ya na ndu mbu:
N'ihi na Biography EBIDO, ọ na-eburu aha otutu “El Pachu“. Ndị nne na nna Papu Gomez nwere ya Thbọchị 15 nke Mach 1988 wee nye ya aha Alejandro Darío Gómez.
Aha “Papu Gomez”Bụ nanị aha otutu. A mụrụ ndị ama ama ama ama n'obodo Buenos Aires, Argentina na ndị nne na nna ndị amachaghị n'oge edere akwụkwọ akụkọ a. N'okpuru ebe a bụ foto nke nne na nna Papu Gomez - ọ dịka nna ya na mama mara mma.
Zute Papu Gomez Ndị nne na nna.
Gomez bụ agbụrụ Italian-Argentine nke agbụrụ ndị agbụrụ na agbụrụ sitere na South America. A zụlitere ya na Avellaneda n'obodo amụrụ ya - Buenos Aries - ebe o toro na nwanne ya nwanyị bụ Monica.
N'ịbụ onye na-eto eto na ezinụlọ dị na Avellaneda na Buenos Aries, Gomez na-eto eto fọrọ nke nta ka ọ dịrị ndụ ma na-eku ume football n'oge ọ bụ nwata.
Familylọ ezinụlọ nke Gomez na-eto eto adịghị anya site na ámá egwuregwu nke ụlọ ọgbakọ Independiente na Racing. N'ezie, ọ fọrọ nke nta ka ọ nwee nkasi obi ịga ịnyịnya ígwè ebe ahụ.
Na-etolite na Avellaneda na Buenos Aries: Foto nwata dị na Papu Gomez.
Kedu ihe ọzọ? Nwanne nna Gomez so n'òtù ndị Independiente nke meriri Intercontinental na 1984 mgbe nna ya na ụlọ ọrụ ahụ na-arụ ọrụ. Enweghị agọnarị eziokwu ahụ bụ na bọọlụ dị na ikuku maka Gomez na-eto eto.
Papu Gomez Mmụta na Ọrụ Buildup:
N'adịghị ka ọtụtụ ndị Argentine, ọkachasị ụmụaka ọgbọ ya, Gómez etoliteghị na-eto otuto nke Diego Maradona. Arụsị ya bụ ndị Legend nke Argentina - Pablo Aimar, Juan Román Riquelme na Sebastián Verón.
Na mgbakwunye, Gomez bụ onye etinye ego na klọb ime obodo, ọ bụ nnukwu onye nkwado nke Independiente (ebe o nwekwara ọtụtụ arụsị) ma nwee ọtụtụ ọrụ ya na-ewu na klọb obodo.
Foto a na - adịghị ahụkebe nke Papu Gomez nọ ọdụ n'akụkụ olulu ahụ ebe ọ kachasị rụọ ọrụ ya na asọmpi egwuregwu.
Papu Gomez Biography Eziokwu - Ndụ Ndụ Mmalite:
Gụ bụ nwata nwoke Gomez na-eto eto, bụ uwe ebe o bidoro ịmalite ịgba bọọlụ asọmpi, ịmụ akwụkwọ na izuzue nka nke ọ na-amabeghị ga-akpọrọ ya gafee mpaghara South America n'ime afọ ole na ole.
Ka ọ na-erule oge Gomez dị afọ 14 ọ sonyeere Arsenal de Sarandí wee bilie n'etiti ọgbakọ ndị Argentine, na-enyere ndị ntorobịa ya aka inweta aha 2005 Copa Tandil tupu ya emee ọgbakọ mbụ na 2006.
Foto dị n’aka ekpe, ọ nyeere Arsenal aka inweta mmeri 2005 Copa Tandil.
Gomez nọrọ afọ isii na klọb ya na afọ 6 kachasị mma mgbe ọ nyere onyinye nke nyere aka n'akụkụ ya merie ngwụcha Copa Sudamericana megide Club America na nchịkwa mgbaru ọsọ.
Nlekọta egwuregwu bọọlụ na-esochi hụrụ Gomez nwere ọmarịcha afọ otu afọ na San Lorenzo de Almagro nke Argentina, mmepe nke dugara ndị Italiantali - Catania iji nweta ọrụ ya.
Papu Gomez Biography - Tozọ Na-ewu ewu Akụkọ:
Mgbe ọ nọ na Catania, ụdị Gomez dọtara mmasị site na klọb ndị elu-elu gụnyere Athletico Madrid, Fiorentina na Inter Milan. Agbanyeghị, ọ họọrọ igwu egwu maka obere Metalist Kharviv nke ama ama na Ukraine.
Ihe kpatara ọgba aghara Gomez metụtara eziokwu ahụ bụ na obi siri ya ike na ọ ga-emeziwanye n'akụkụ Ukraine ma nweta ohere iji bụrụ akụkụ dị mkpa nke ọgbakọ kesara na Champions League na-abịanụ.
N'ụzọ dị mwute, atụghị anya atụmanya a na Metalist Kharkiv. Iji malite, UEFA kwadoro mmachibido iwu nke Metalist site na njikọ ahụ na-ekwu maka itinye aka na klọb na nsonye 2008 dị ka ezigbo ihe kpatara ya.
Iji mee ka ihe ka njọ, Gomez enweghị obi ụtọ na ụlọ ọrụ ahụ enweghị mma na ọhụụ yana yana mgbochi asụsụ nke mere ka ọ chee na ọ furu efu.
N'oge na-adịghị anya tupu o kwupụta ebumnuche ya ịpụ na nkwekọrịta ya site na ịnakwere ọkara ụgwọ mana enyereghị arịrịọ ahụ.
Na Metalist, Papu dara ogbenye gbalịsiri ike n'ihe niile gụnyere ọzụzụ.
Papu Gomez Biography Eziokwu - Bilie Iji Maara Aha Akụkọ:
Gomez jụrụ ịlaghachi na Metalist oge na-esote na-ekwu banyere ọgba aghara na ọgba aghara jupụtara na Ukraine, ọtụtụ ndị egwuregwu mba ofesi alọghachighịkwa maka otu ihe ahụ.
N'oge na-adịghị anya, Gomez nke Italian n'akụkụ Atlanta nwetara ya na awa ikpeazụ nke windo mbufe oge okpomọkụ na Italytali.
Nnwere onwe n'ikpeazụ: Ọ Papụ Papu Gomez amaghị oke mgbe Atlanta nwetara ya n'aka Metalist.
Ọganihu ahụ nwere oge mmalite 2014/2025 mara mma nke mara mma na Atlanta wee gaa n'ihu ịme onwe ya ka ọ bụrụ otu n'ime ndị na-eduzi ihe mgbaru ọsọ na ndị na-enye ọtụtụ enyemaka.
Ọbụna ọ bụ onye isi Atlanta ka ọ bụrụ ebe nke atọ nke akụkọ ihe mere eme na oge 2018-19 A, ọnọdụ nke mere ka ha nwee ọnọdụ na 2019-20 UEFA Champions League, yana 2019 Coppa Italia Final. Ndị ọzọ, dị ka ha na-ekwu, bụ akụkọ ihe mere eme.
Papu Gomez Life Eziokwu:
N'ịga n'ihu Papu Gomez hụrụ ndụ n'anya, ọ na-akwanyere nwunye ya ùgwù wee lụọ nwunye ya bụ Linda ma ghara itinye aka na esemokwu alụmdi na nwunye ma ọ bụ nke alụmdi na nwunye. Enweghikwa ihe ndekọ nke ụmụ nwanyị Papu Gomez tupu ya ezute Linda.
Linda na Gomez nọ na mmekọrịta dị mma nke alụmdi na nwunye.
Linda abụghị naanị nwunye Papu Gomez kama ọ bụ onye na-akwado ya nke ukwuu yana nwanyị na-arụ ọrụ nke na-arụ ọrụ dị ka onye na-ese ụkpụrụ ụlọ. Di na nwunye di na nwunye nwere umuaka ato n'oge edere ha tinyere Bautista (nwa nwoke) Constantina (ada) na milo.
Foto mara mma nke Papu Gomez Ezinụlọ- Nwunye ya na ụmụaka.
Papu Gomez Ndụ Ezinụlọ:
Eziokwu n’enweghị mgbagha na-eme ka ọrụ na ịhụnanya ndụ ya bụrụ nke atụ. Na ngalaba a, anyị ewetara gị ọtụtụ ihe gbasara ndị ezinaụlọ Papu Gomez bido na ndị mụrụ ya.
Banyere Papu Gomez nna na nne: Iji bido ndị mụrụ Gomez, ọ naghị ekpughe ọtụtụ ihe banyere nna ya na nne ya.
Obere ihe anyị maara banyere nne na nna na-akwado ya sitere na mkparịta ụka nke Gomez gosipụtara na nkenke na nna ya na ụlọ ọrụ Independiente dị na mpaghara. O kwetakwara na mama ya bụ otu n'ime ụmụ nwanyị kachasị mkpa site na nwata ruo n'oge.
Foto ememe nke Papu Gomez na ndị mụrụ ya na-akwado nkwado mgbe niile.
Banyere Papu Gomez na nwanne na ndị ikwu: Papu Gomez nwere nwanne nwanyị akpọrọ Monica ebe ọ maghị ma o nwere ụmụnne nwoke na ụmụ nwanyị ndị ọzọ na-akwado Monica.
Enweghi akwukwo ozo banyere ezinyere ezinyere Papu Gomez na nnabata ya karia ndi nna nna ya na nna nna ya na nne nne ya.
Achọpụtala otu nwanne nne Gomez dị ka Hugo ebe ndị nne na nna ya, ụmụ nwanne nne ya, ụmụ nwanne ya na ụmụ nwanne ya amachaghị.
Foto a na - adịghị ahụkebe nke Papu Gomez na nwanne ya nwanyị bụ Monica.
Papu Gomez Ndụ Nke Onwe:
You ma na Papu Gomez anaghị adị mkpa ka ọ dịrị na akụkọ maka ịdị mma iji gaa n'ụlọ ikpe? Personalitydị njirimara ya - nke Aquarius Zodiac kọwara nke ọma - na-etinye ya n'ọkwa mgbe niile.
Ọ dị jụụ, pụọ iche, lekwasiri anya n'ihe, nwee ezi obi ma ghara ikpughe eziokwu banyere ndụ onwe ya na nke onwe ya. Ihe Gomez na ihe omume ntụrụndụ gụnyere ikiri ihe nkiri, igwu mmiri, igwu egwuregwu vidio, igwu egwu tennis, isi nri na iso ndị ezinụlọ ya na ndị enyi ya nọrịa.
Ndị ọgba bọọlụ ekwesighi ịgwa ya na ọ bụ nnukwu na isi nri. Ngwá ọrụ ndị ahụ na-ekwuchitere ya.
Papu Gomez si ebi ndụ:
Na-ekwu maka etu Papu Gomez si eme ma na-emefu ego ya site na ụgwọ na ụgwọ ọ na-enweta maka ịgba bọọlụ bọọlụ na-ada ụda na-egosi na ọ na-ebi ndụ okomoko.
Ihe akaebe banyere ụdị ndụ ahụ na-agụnye ike ya ịbanye n'ụgbọelu ndị njem maka njem gaa na ebe ezumike ndị dara oké ọnụ. Na mgbakwunye, onye na-ebuso anyị agha nwere ụgbọala dị oke ọnụ adọba adọba ụgbọala na ọmarịcha ụlọ ya na ụlọ.
Ihe akaebe nke ibi ndu: Nke a bụ Papu na-egosi n'akụkụ otu n'ime ụgbọ ala ya ndị mara mma.
Papu Gomez Eziokwu Eziokwu:
Iji kpoo akụkọ banyere nwata na Papu Gomez na akụkọ ndụ anyị, anyị na-ewepụta obere eziokwu ma ọ bụ akụkọ banyere ọtụtụ ndị gbasara egwuregwu bọọlụ.
Okingụ sịga na ị drinkingụ ihe ọ drinkingụ :ụ: Ọ bụ ezie na ahụbeghị Gomez ka ọ na-a smokingụ sịga, ọ dị ukwuu n'ị drinkingụ mmanya ma hụ ya ka ya na nwunye ya Linda na-a enjoyingụ mmanya. Na agbanyeghị, o doro anya na onye na-aga n'ihu na-a drinksụ mmanya iji chebe ahụike ya ma gbochie oge ịkwa emo ọha.
Ụ mmanya n'ụzọ kwesịrị ekwesị: Ya na nwunye ya hụrụ n'anya ị enjoyingụ mmanya biya.
Religion: Enweghi ihe ndekọ nke Papu Gomez nke doro anya banyere okpukpe ya. Otú ọ dị, nsogbu ndị ahụ na-amasị ya ịbụ Onye Kraịst dị ka ihe doro anya na aha nwa ya nwoke bụ Bautista na ada Constantina. Nke a pụtara na ikekwe ndị mụrụ Papu Gomez zụlitere ya Onye Kraịst.
Ogbugbu: Gomez dị n'etiti ọtụtụ ndị na - ahụ maka egwuregwu bọọlụ Argentine bụ ndị buru ibu na egbugbu. N'ihu nwere nka ahu ocha na ogwe aka ya, obi ya, ukwu ya nwere ohere zuru ezu itinyekwu nka
Foto dị jụụ na-egosi akụkụ nke tattoos Papu Gomez.
Banyere aha otutu ya: You maara na aha Gomez "El Papu" nwere ihe jikọrọ ya na ogo ya dị 5 ụkwụ na 5 sentimita asatọ.
Aha otutu nke ekwenyere na nne ya nyere ya aka site na "Papuchi" nke putara "obere oge".
Armband: N'ịbụ onye ịbụ onye maara ihe n'egwuregwu bọọlụ bụ Papu Gomez, ama ama maka ụdị ya na isi mmalite ya maka nwunye ya nke na-eme ka ndị isi mara mma mara ya.
Ogwe aka a na-asọpụrụ ndị isi football ma ọ bụ na-echeta oge pụrụ iche na football yana na ndụ ezinụlọ Gomez.
Nchikota ole na ole nke ụfọdụ akara aka nke ndị egwuregwu bọọlụ na-eyi.
Nyochaa: Daalụ maka ịgụ Papu Gomez Childhood Akụkọ ya na Eziokwu Untold Biography. Na LifeBogger, anyị na-agbasi mbọ ike maka izi ezi na ịkwụwa aka ọtọ.
Ọ bụrụ n'ịchọta ihe na-adịghị mma, biko kenye anyị ya ịza ajụjụ n'okpuru. Anyị ga-eji nkwenye gị kpọrọ ihe mgbe niile.
Fint nok, men det hedder ”Papu Gomez '” na genitivt, ikke ”Papu Gomezs“.